January 2022 - Achawlaymyar
အမှားကြာလျှင် အမှန်ထင် ရခိုင်နဲ့ မြွေပွေးတွေ့လျှင် ရခိုင် အရင်သတ် ဆိုတဲ့စကား
January 31, 2022 by Achawlaymyar
အမှားကြာလျှင် အမှန်ထင် ရခိုင်နဲ့ မြွေပွေးတွေ့လျှင် ရခိုင် အရင်သတ် ဆိုတဲ့စကား မြန်မာပြည်မှာ လူတော်တော်များများကြားဖူး သုံးဖူး ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောသာပြော အဓိပ္ပါယ်ဆိုလိုရင်း မသိတဲ့လူတွေ တော်တော်များများ ရှိပါတယ် ။ တကယ်တော့ ရခိုင်ငှက်ပျောရဲ့အစေးဟာ မြွေပွေးရဲ့ အဆိပ်ကို ပြေပျောက်စေနိုင်တဲ့အတွက် မြွေပွေးနဲ့တွေ့ရင် ရခိုင်ငှက်ပျောပင်ကို ခုတ်ဖြတ်ပြီး ရလာတဲ့အစေးနဲ့မြွေပွေးရဲ့အဆိပ်ကို ဖြေခိုင်းတာပါ ဒီစကားစုဟာ ကိုယ့်ရဲ့ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကြား အမုန်းပွားစေမယ့်စကားမို့ နားလည်အောင် ရှင်းပြရတာပါ… ။ မေတ္တာဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။ မူရင်းရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ် ပေးပါသည်….။ Zawgyi အမွားၾကာလွ်င္ အမွန္ထင္ ရခိုင္နဲ႔ ေႁမြေပြးေတြ႕လွ်င္ ရခိုင္ အရင္သတ္ ဆိုတဲ့စကား ျမန္မာျပည္မွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၾကားဖူး သုံးဖူး ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာသာေျပာ … Read more
မြန်မာ့ ရိုးရာ သဘာ၀ တင်းတိပ် ပျောက်ဆေး
သဘာ၀ တင်းတိပ် ပျောက်ဆေး တင်းတိပ်ဆိုတာ မျက်နှာ အသားကို နေပူလောင်တာ၊ မီးပူမိတာက စတာပါ မီးအပူနဲ့ ချက်ရ ၊ ပြုတ်ရတာတွေလည်းပါတာပေါ့” သုံးရမှာက အိမ်မှာ ငွေလည်းမကုန် ၊ လွယ်လွယ်နဲ့ ရတဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲက မြန်မာ့ တိုင်းရင်းဆေး ပစ္စည်း မကျည်းသီးမှည့် ပါဘဲ ။ ကျွန်တော် အဲဒီနည်းကို အမကြီးတွေ ၊ ညီမတွေကို ပေးပြီး စမ်းသပ် ခိုင်းတာ ဆယ်ရက် – ဆယ်ငါးရက်အတွင်း သိသိသာသာ ပျောက်သွား တာတွေကိုမျက်မြင် တွေ့ရလို့ မျှဝေပေးတာပါ ။ ဆေးနည်း ၁ ။မကျည်းသီးမှည့် နည်းနည်းကို ခွက်တစ်ခုထဲမှာရေ နဲနဲထည့်ပြီး ပုံထဲက အတိုင်း မပျစ် မကျဲလေး ဖျော်ထားပါ ။ … Read more
တချိန်ချိန်မှာ အသုံးဝင်မှာမို့ ဖုန်းထဲမှာ သိမ်းထားလိုက်ပါ
တချိန်ချိန်မှာ အသုံးဝင်မှာမို့ ဖုန်းထဲမှာ သိမ်းထားလိုက်ပါ ၁။ ဆားအခတ်များသွားလျှင် အာလူးအလုံးလိုက် (၂/၄)လုံးထည့်ပါ။ ၂။ ပဲပြုတ်သည့်အခါ စားချင်သဖွယ်….အိအိဖောင်းဖောင်း စိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်အောင် ရေလဲပြီးသောအခါ ရေအနည်ငယ် ထည့်၍ ထန်းလျက်(၂)လုံးခန့် ထည့်ထားလိုက်ပါ။ ၃။ ကန်စွန်းရွက်ကို အစိမ်းရောင်လေး အတိုင်းပဲ စားချင်သဖွယ်ဖြစ်လိုပါက အဖုံးမအုပ်ပဲ ကြော်ပါ။ ၄။ ဒန်အိုးဒန်ခွက်များ ပြောင်စင်လိုပါက ဂေါ်ဖီထုတ်မှ အရွက်ကြမ်းဖြင့် ပွတ်တိုက်ပါ။ ၅။ လက်ဘက်ရည်အိုး၊ခွက်၊ အစွန်း အထေးများပြောင်စင်လိုပါကဆော်ဒါ(သို့မဟုတ်-လက်ချားအမှုန့်)ထည့်ပြီး ညသိပ်ထားပါ။ ၆။ အိမ်သာကြွေခွက်,ကျောက်ပြားများ သန့်ရှင်းလိုပါက လက်ချားမှုန့်နှင့်ရှောက်ရည် ရောစပ်ပြီး ပွတ်တိုက်ပါ။ ၇။ ယင်ပေါလျှင် ဖယောင်းတိုင် (၂)တိုင် ထွန်းပါ။ ၈။ အင်္ကျီကော်လံမှ ဆီချေးများကို ရှန်ပူခေါင်းလျှော်ရည်ဖြင့်ပွတ်တိုက်လျှော်ပါ။ ၉။ ပုရွက်ဆိတ်မလာလိုသော်ကန့်မှုတ်ကို နည်းနည်းဖြူးပေးပါ။ ၁၀။ ဟင်းရဲ့အနံ့အသက် … Read more
ဝမ်းသာလိုက်တာ…ဆရာလေး နွေးနွေးထွေးထွေး နေရတော့မှာပေါ့နော်
ဝမ်းသာလိုက်တာ…ဆရာလေး နွေးနွေးထွေးထွေး နေရတော့မှာပေါ့နော် ဆရာလေး အသက် (၈၂)နှစ် ပြိုကျခံနီး ဝါးကျောင်းလေးမှာ…တပါးတည်း သီတင်းသုံးပါတယ် ကျန်းမာရေး မကောင်းတုန်းက ဆက်သွယ်လာသဖြင့်… အာဟာရဖြစ်မဲ့ အစားစားများ/ Ensure များ သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့ပြီနောက်…ကျန်းမာရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါပြီ ဒုတိယတခါ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တုန်းက…ကျနော်တို့ ဆန်အိတ်တွေ ကျောင်းပေါ် တက်တင်ပေးတုန်း ကျွံ့ကျခဲ့ပါတယ်… ခုတခါ သွားရောက်လှူဒါန်းတော့…ကျောင်းလေးက အတော့်ကို ယိုယွင်းပျက်စီးနေပါတယ်…အပေါက်တွေ များစွာဖြင့် အတော့်ကို ပျက်စီးနေပါပြီ ဆရာလေး…ညဘက်တွေ အိပ်ရတာ အဆင်ပြေရဲ့လား…ရာသီဥတုအေးတော့ အဆင်ပြေရဲ့လား အရမ်းချမ်းတာပဲ သားရယ်…ညကနေ မနက်ထိ အရမ်းအေးတော့ အိပ်မရဘူး…အရမ်းချမ်းတာပဲ မိုးတွင်းဆိုလဲ…မိုးယိုလို့ အိပ်မရ ခက်ခဲပါတယ် သားရယ်…. တင်ပါ့ ဆရာလေး…တပည့်တော် ဆရာလေးကို ကျောင်း အသစ်ဆောက်လှူပါ့မယ် ဝမ်းသာလိုက်တာ…ဒါဆို ဆရာလေး လုံခြုံနွေးထွေးစွာ နေရတော့မှာပေါ့နော် ဒါပေါ့…ဆရာလေး…တပည့်တော် … Read more
တပို့တွဲလအတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ (1.2.2022) မှ (1.3.2022)အထိ တစ်လတာလုံး
တပို့တွဲလအတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ တပို့တွဲလဆန်း(၁)ရက်နေ့ (1.2.2022) မှ တပို့တွဲလကွယ်(1.3.2022)အထိ တစ်လတာလုံး “​ကြွေပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ထဲတွင် အနာအဆာကင်း၍သန့်စင်ထားသော ကွမ်းရွက်အသန့်နှစ်ရွက် တို့ကို ပုံပါအတိုင်း ဖြန့်ခင်း‌ပေးလိုက်ပါ။ ထိုနောက် ကွမ်းရွက် တစ်ရွက်ပေါ်တွင် ဆန်အနည်းငယ် တင်ပေးရမည်။ နောက်ထပ်ကျန်ရှိနေသော ကွမ်းရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မူ သကြားအနည်းငယ် ကို တင်ပေးလိုက်ရပါမည်။” ဤယတြာကို ဘုရားကျောင်းဆောင် ပေါ်သို့တင်၍ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား‌ လှူဒါန်းပေး‌ထားရပါမည်။ ယခုလတစ်လတာတွင် ‌သံပုရာရည်တစ်ခွက်စီ ကိုနေ့စဥ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ကပ်ပေးနေခြင်းဖြင့်လည်းမိမိအတွက်ထူးခြားမှူဖြစ်စဥ်များကောင်းကျိုးများစွာကိုလည်း ရရှိခံစား‌နေရမည်ဖြစ်သည်။ ကံချေကန်တော့ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့ရန် မမေ့ပါနှင့်။ နေ့စဥ်အောက်ဖော်ပြပါဂုဏ်တော်များကိုရွတ်ဖတ်ပါ။ ဣတိပိသောဘဂဝါ အရဟံ=၁၅ခေါက် ဣတိပိသောဘဂဝါ သမ္မာသံဗုဒ္ဓေါ=၈ခေါက် ဣတိပိသောဘဂဝါ သတ္တာဒေဝမနုဿာနံ=၂၁ခေါက် တပို့တွဲလအတွက်နေ့စဥ်လာဘ်ပွင့်အရပ်မျက်နှာများ တနင်္ဂနွေနေ့=အရှေ့မြောက်အရပ် တနင်္လာနေ့=နောက်အရပ် အင်္ဂါနေ့=အရှေ့တောင်အရပ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့=တောင်အရပ် ကြာသပတေးနေ့=မြောက်အရပ် သောကြာနေ့=အရှေ့အရပ် စနေနေ့=အနောက်တောင်အရပ် အထက်ပါအတိုင်းနေ့အလိုက်နေ့စဥ်အရပ်မျက်နှာမူ ဧဟိလာဘံ ဟူ၍(၂၇)ခေါက်တိတိရွတ်ပေးရပါမည်။ ဆုတောင်းစာ … Read more
ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် မင်္ဂလာပွဲနေ့မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတို့သားမှန်း မေ့နေခဲ့တဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ရယ်စရာအဖြစ်
မကြာသေးမီက အမျိုးသားတစ်ဦးက သူ့မင်္ဂလာပွဲမှာ သူက သတို့သားဆိုတာကိုမေ့သွားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ရယ်စရာကောင်းတဲ့မင်္ဂလာအခိုက်အတန့်ဟာ လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဇနီးအသစ်လေးကတော့ ဒီအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး စိတ်မပျော်ဖြစ်နေတော့မှာအသေအချာပါဘဲဗျာ။ ချစ်သူနှစ်ယောက်စလုံးက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ကြပြီး ဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့နေ့အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေရင်တောင်မှ မင်္ဂလာပွဲတွေက အရမ်းစိတ်ဖိစီးမှုများနေနိုင်တာ အမှန်ပါပဲ။ ထိုနေ့မှာ အခမ်းအနားကြီးအတွက် လုပ်စရာတွေ အများကြီးကျန်နေမှာဖြစ်သလို အခမ်းအနားအတွင်းမှာတောင် မင်းကိုစိတ်မ၀င်စားစေနိုင်တဲ့ တခြားစိုးရိမ်မှုတွေလည်း ရှိနေတတ်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီသတို့သားရဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်ပုံကတော့ သူကိုယ်တိုင် မင်္ဂလာဆောင်နေတာကို မေ့သွားပုံရပြီး အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေကို ရယ်မောသွားစေခဲ့ပါတယ်။ . TikTok မှာ @donnagranalde က မျှဝေထားတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့ ၎င်းမင်္ဂလာပွဲဟာ အစပိုင်းမှာ အဆင်ပြေနေခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် သတို့သမီးဟာ မိဘများနှင့်အတူ ခန်းမရှေ့လမ်းလျှောက်သွားကာ သတို့သားကလည်း ရိုးရာအရ သတို့သမီးမိဘတွေကို အရိုအသေပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းရဲ့လေးစားမှုကို ပြသနေခဲ့ပါတယ်။ ထိုအစီအစဉ်ပြီးနောက်မှာ … Read more
မကြေးစည် အဖြစ်နဲ့မ ကြာခင် ရောက် ရှိ လာ တော့ မယ့်သတင်းကောင်း လေးကို မျှဝေ လာခဲ့ တဲ့ သရုပ်ဆောင် မေမီကိုကို
ပရိသတ်ကြီးရေ မေမီကိုကိုကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေး ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ MRTV –4ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပြည့်ဝလှတဲ့သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည် ကြောင့် ပရိသတ်တွေက မေမီကိုကို ကို အားပေးချစ်ခင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ မေမီကိုကိုက သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းလေးတစ်ခုကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေ ဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ သတင်းကောင်းလေးကတော့ သူရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတိုင်းကို မလွတ်တမ်းကို အားပေးနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် သူပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားခဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်လေးက မကြာခင်အချိန်မှာ ပြသတော့မှာဖြစ်တဲ့ သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးရဲ့ နာမည်ကတော့ “မကြေးစည်” လို့ အမည်ပေးထားပြီးတော့ မေမီက အဓိကဇာတ်ကောင်အနေနဲ့ ဒီဇာတ်လမ်း တွဲမှာ ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ၉သိရှိရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ “မကြေးစည်” ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂)ရက်နေ့မှာ စတင်ပြသသွားမှာမို့ … Read more
2022-ခု ဖေဖေါ် ဝါရီလ ဟောစာတမ်း စနေ သားသမီးများ
2022-ခု ဖေဖေါ် ဝါရီလ ဟောစာတမ်း စနေ သားသမီးများ စနေ သားသမီးများ ယခု ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အပေါင်းအသင့်မိတ်ဆွေများဖြင့် အတူတကွ ကုသိုလ်အလှူများပြုလုပ်ပါ။ ကျန်းမာရေး ချိူ့တဲ့နေသူများကိုတတ်နိုင်သမျှကူညီပါ။ လူမူရေးကိစ္စရပ်များကိုလည်း တတ်နိုင်သလို ဆောင်ရွက်ပါ။ သို့သော် မိမိအကျိုးထိပါးမှုမရှိအောင် ဦးစားပေးနေထိုင်ရမည်။ စားဝတ်နေရေအခက်အခဲရောက်နေသောလူသာမန်၊လူဆင်းရဲများ ပြန်ကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မည်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းနှင်ပတ်သက်၍ အကျိုးမြတ်ကောင်းသတင်းစကားကောင်းရမည်။ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသေးစားကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများအတွက် အထူးအောင်မြင်မှုပြန်လည်ခေါင်းထောင်လာမည်။ရပ်နေသောလုပ်ငန်းများပြန်လည် စတင်လုပ်ကိုင်ရမည်။ ဦးစီး၊ ခေါင်းဆောင်များ အစားထိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများ ဖြစ်လာတတ်သည်။ တနလ်ာ၊သောကြာနံလုပ်ငန်းနှင့် ထိုနေနံသားသမီးများ အကျိူးပေး၊လုပ်ငန်းသစ်လုပ်ခြင်း၊အလုပ်သစ်လျှောက်ခြင်းနှင့်ရင်းမြှုံနှံမှုများစတင်ခြင်းတို့ အကျိူးဖြစ်အံ့။ ပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်း၊ကားစင်တာ၊ကားအအရောင်းအဝယ်၊ခြံအရောင်းအဝယ်၊ကြေးလုပ်ငန်း၊ကျောက်ဆစ်လုပ်ငန်း၊​ငွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ကျောက်မျက် ရတနာနှင့်၊ ရေလုပ်ငန်း၊သစ်၊သစ်စက်၊ပရိဘောဂလုပ်ငန်း၊ပြန်ကြားရေးငြာနနှင့်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ အကျိူးထူးပေးမည်။ (ရွှေ၊ငွေ၊ပုလဲ၊အထည်ရတနာများ လှည်း၊ ရတနာ၊ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ယဉ်၊ ရွှေ ၊ လူ ၊ အနုပညာ ၊ အလှပညာ) လုပ်ငန်းများနှင့် ပါတ်သက်၍ အတိုက်အခံ၊လုယှက် … Read more
မနက်ဖြန် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာနားကနေ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ဥက္ကာခဲကြီးတစ်ခု ဖြတ်သန်းသွားမည်
မနက်ဖြန် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာနားကနေ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ဥက္ကာခဲကြီးတစ်ခု ဖြတ်သန်းသွားမည် ၁.၂.၂၀၂၂ ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာနားကနေ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ဥက္ကာခဲကြီးတစ်ခုဖြတ်ပျံမယ်လို့ NASA က ကြေငြာပါတယ်။ ဖြတ်သန်းချိန် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀နါရီမှ ညနေ၄နာရီအတွင်း မြန်မာ နိုင်ငံပေါ်က ဖြတ်သန်းနိုင်သည်ဟု ပြောကြားထားပါတယ္။ ကြီးလွန်းလို့ ဒိုင်နိုဆောတွေကိုမျိုးတုန်းစေခဲ့တဲ့ ဥက္ကာခဲအရွယ်နီးပါးရှိပါတယ်တဲ့။သူ့ဆီက ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဆွဲအားဟာ ကမ္ဘာကိုသက်ရောက်မှာဖြစ်လို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ အိမ်အပြင်သိပ်မထွက်ကြဘဲ၊ အိမ်မှာနေခြင်းဖြင့် အသက်ဘေးကို ထိခိုက်နိုင်ချေလျော့ချနိုင်ကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂအာကာသအေဂျင်စီကကြေငြာထားပါတယ်။ ဥက္ကာခဲအန္တရာယ်ကကြီးတာမို့ အိမ်မှာဘဲ နေကြပါ။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်ခုခုဖြစ်ရင်လည်း တစ်ရပ်ကွက်လုံး တက်ညီလက်ညီ ဝိုင်းကူညီပေးကြပါ။ Credit Unicode မနကျဖွနျ ဖဖေောျဝါရီ ၁ ရကျနေ့မှာ ကမ်ဘာနားကနေ … Read more
စီးပွာရှာအလုပ်လုပ်ရင်း မနားရပေမယ့် သားနဲ့သမီးကိုလည်း ရသလောက်အချိန်ပေးရင်း ဂရုစိုက်ပေးနေတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းရဲ့ဗီဒီယို
သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်မလေး နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကတော့ အတိတ်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ အိမ်ထောင်သက် (၄) နှစ်မပြည့်ခင်မှာ သေကွဲကွဲခဲ့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းက အခုဆိုရင် သားနဲ့သမီးကို တစ်ယောက်တည်း မားမားမတ်မတ်စောင့်ရှောက်ရင်း ဘဝတစ်ပါးကူးပြောင်းသွားတဲ့ ခင်ပွန်းသည်အတွက် ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမပြတ်ပြုလုပ်နေလျက်ရှိပါတယ်။ မိသားစုရဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းဟာ အခုဆိုရင် စီးပွားရှာရင်းတစ်ဖက်နဲ့ သားသမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းက စီးပွာရှာအလုပ်လုပ်ရင်း မနားရပေမယ့် သားနဲ့သမီးကို ရသလောက်အချိန်ပေးရင်း ဂရုစိုက်ဖြစ်နေကြောင်းကို “သဲလေးတွေကိုအချိန်ပေး ဆိုပြီး သူမတို့သားအမိသုံးယောက်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ပြသလာပါတယ်။ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကတော့ အမြဲတမ်းအလုပ်တွေလုပ်နေရပေမယ့် သားနဲ့သမီးအတွက်လည်း တာဝန်ကျေတဲ့မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် အမြဲတမ်းကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နန်းမြတ်တို့မိသားစုလေး အခုလိုပဲ အမြဲထာဝရပျော်ရွှင်အေးချမ်းနိုင်ပါစေနော်။ crd ဇော်ဂျီဖြင့်ဖတ်ရန် စီးပွာရှာအလုပ်လုပ်ရင်း မနားရပေမယ့် သားနဲ့သမီးကိုလည်း ရသလောက်အချိန်ပေးရင်း ဂရုစိုက်ပေးနေတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းရဲ့ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်မလေး နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကတော့ အတိတ်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ … Read more